Mpiara-miasa amin’ny fanavaozana ve ny Vondrona Eoropeana sy i Armenia? · Global Voices teny Malagasy
The EU will give Armenia a 2.6 billion Euro aid package Hanome an'i Armenia fonosana fanampiana 2,6 lavitrisa Euro ny Vondrona Eoropeana
Voadika ny 14 Novambra 2021 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, українська, English
“Filankevi-piaraha-miasa Vondrona Eoropeana-Armenia – Mey 2017” avy amin'ny Sampan'asa Eoropeana Ivelany – EEAS) nahazoana alalana CC BY-NC 2.0
Navoaka voalohany tao amin'ny OC Media ity lahatsoratra nosoratan'i Ani Avetisyan ity. Navoaka eto indray ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fiarahamiasa ara-botoaty.
Nandritra ny fitsidihana ofisialy tany Yerevan tamin'ity fahavaratra ity,nanambarana fanampiana 2,6 miliara Euro ho an'i Armenia ny Komiseran'ny Vondrona Eoropeana ho an'ny Mpifanolo-bodirindrina sy ny Fihitarana mba hanohanana ireo fisantarana andraikitra voamarika miisa dimy mandritra ny efa-taona manaraka. Ity fonosana ity no fanampiana lehibe indrindra ho an'i Armenia nomen'ny Vondrona Eoropeana hatramin'izao. Ahitana “ny fifandraisana ara-pitaterana, ny fahari-pery sy ny fanarenana ireo faritany Atsimo, ny fahombiazan'ny angovo sy ny angovo azo havaozina, ny fanovana ankihy sy ny fanohanana ho an'ny Orinasa Madinika sy Salantsalany” ity fisantarana andraikitra miisa dimy ity.
Tonga mafana ihany koa ny fonosana fanohanana noho ny fifanarahana Fiarahamiasa Mazava sy Nohatsaraina eo amin'i Armenia-Vondrona Eoropeana (CEPA), izay nanan-kery tamin'ny 1 Marsa. Ahitana fifanarahana mampitombo ny fiarahamiasa eo amin'i Armenia sy ny Vondrona Eoropeana mikasika ny fanavaozana andrim-panjakana, fampiasam-bola ara-toekarena sy ny fanesorana ny sara-panafarana sy fanondranana eo amin'i Armenia sy ny vondrona 27 mpikambana.
“Porofon'ny fahatokisana amin'ny demaokrasia”
Iray amin'ireo fanazavana ao ambadiky ny fampitomboana ny famatsiam-bola ny zava-bita ara-politikan'ny governemantan'ny Praiminisitra Nikol Pashinyan sy ny fandresen'izy ireo manoloana ny fahefana mialoha-revolisionera tao Armenia tamin'ny fifidianana parlemantera tamin'ny volana Jona.
Niakatra teo amin'ny fitondrana i Pashinyan taorian'ny fitarihana ny revolisiona tamin'ny taona 2018, nampanantena fanavaozana ara-toekarena ary nandroaka ireo oligarkia sy ampihimamba nanjazaka teo aloha. Na izany aza, niharatsy ny lazany tamin'ny volana Novambra 2020, rehefa resy tamin'ny ady Nagorno-Karabakh tamin'i Azerbaijan mpifanolo-bodirindrina aminy ny firenena. Niafara tamin'ny fampitsaharana ady nataon'i Moskoa namerina tamin'ny laoniny ny velaran'i Nagorno-Karabakh sy ireo distrika manodidina ho ao ambany fiandrianam-pirenen'i Azerbaijan izay jerena ho tsy fahombiazan'i Pashinyan.
Ny volana manaraka, satria nitombo ny fanendrikendrehana ny praiminisitra tamin'ny fitantanana ny ady, dia nametra-pialàna izy, araka ny takin'ny lalàna, mba ahafahana manao fifidianana no sady mijanona ho mpitondra ny firenena. Naminavina ny fandresen'i Pashinyan ny fitsapan-kevitra talohan'ny latsa-bato na dia teo aza fahasimban'ny lazany. Raha niresaka tamin'ireo mpanohana azy nivory tao Yerevan tao amin'ny Kianjan'ny Repoblika afovoan-tanàna i Pashinyan tamin'ny 17 Jona, nilaza ny praiminisitra teo aloha hoe: “Azo antoka ary tsy isalasalana fa handresy amin'ny isanjato goavana amin'ny [vato] ny vahoakan'i Armenia. Ary eny, efa nanapa-kevitra ny zava-drehetra tao an-tsainy sy tao am-pony ary tam-panahiny ny mponina any Armenia.”
Natolotra “mifototra amin'ny zava-bita teo aloha” ny fonosana 2,6 miliara Euro, hoy i Andrea Wiktorin, masoivohon'ny Vondrona Eoropeana any Armenia, tamin'ny OC Media. “Mandritra izany fotoana izany, hiankina amin'ny fahamatoran'ny tetikasa izany amin'ny farany sy ny halakin'ny fametrahantsika ireo fanevam-pirenena ireo.” Ny Vondrona Eoropeana dia mamaritra ny “fitarohan-dalana” ho tetikasa laharam-pahamehana mivaingana manana vokatra azo tsapain-tanana izay nofantarina miaraka amin'ireo firenena mpiara-miombon'antoka.”
Raha ny momba an'i Armenia, ny fitarihan-dalana dia ahitana fanohanana ara-toekarena mivantana hatramin'ny 30.000 tapitrisa Euro ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany; hatramin'ny 600 tapitrisa Euros ho an'ny lalantsaram-pitaterana avaratra mianatsimo; hatramin'ny 300 tapitrisa Euros amin'ny fampindramam-bola sy fanomezana ho an'ny sehatry ny teknolojia ao Armenia; ary hatramin'ny 80 tapitrisa Euros ho an'ny fampiasam-bola ara-toekarena sy fotodrafitrasa any amin'ny faritra atsimo Faritanin'i Syunik, mba hampivelarana ny “faharetana”; ary hatramin'ny 120 tapitrisa Euros ho an'ny fampiasam-bola ho an'ny “angovo mahomby” kokoa ao Yerevan, anisan'izany ny fanavaozana ny fitateram-bahoaka eo an-drenivohitra.
Nilaza i Wiktorin fa “nandray naoty tsara” ny tatitra nataon'ny mpanara-maso fifidianana avy amin'ny OSCE taorian'ny fifidianana tamin'ny volana Jona ny Vondrona Eoropeana. Namintina ny tatitra fa “nahitana fifaninanana ny fifidianana ary amin'ny ankapobeny tsara tantana tao anatin'ny fotoana fohy.” Nanampy koa izy fa manohana ny “fanoloran-tena lehibe ataon'i Armenia hanohy hatrany ny fandaharan'asany amin'ny fanavaozana” ny Vondrona Eoropeana.
Nidera ny fifidianana tampoka ho porofon'ny “fahatokisan'ny vahoaka Armeniana ny demaokrasia” sy ny “faharetan'ny demaokrasia ao Armenia” ihany koa ny ambasadaoro Litoanianina any Armenia, Inga Stanytė-Toločkienė. Nilaza ihany koa ny ambasadaoro, fa ho fanampin'ny fonosana fanampiana sy ny fampiharana ny fifanarahana CEPA, “hifandraika amin'ny firosoana bebe kokoa mankany amin'ny fanalalahana ny lalana iray hafa hanohanan'i Litoania an-kafanam-po an'i [Armenia].”
Nilaza tamin'ny OC Media ny mpikambana Litoanianina ao amin'ny Parlemanta Eoropeana Rasa Juknevičienė fa mba hampiroborobo tokoa ny fiaraha-miasa eo amin'ny Vondrona Eoropeana sy i Armenia, dia tsy maintsy “mandresy ny lova navelan'ny ady aloha i Armenia, na dia maharary aza” ary “mifantoka tanteraka amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena”.
“Tsy vahaolana tsara mihitsy ny ady”
Viola von Cramon, a German Member of the European Parliament, told OC Media that the EU “can be more involved” in the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict.
Nilaza tamin'ny haino aman-jery OC i Viola von Cramon, mpikambana Alemaina ao amin'ny Parlemanta eropeana fa ny “afaka mandray anjara bebe kokoa” amin'ny fanapahan-kevitra momba ny ady Nagorno-karabakh ny Vondrona Eoropeana.
Raha ny filazan'i Von Cramon, lalana iray ho an'ny fandraisany anjara bebe kokoa an'ny Vondrona Eoropeana ny hoe raha nanolo an'i Frantsa ho filoha mpiara mitantana ny vondrona Minsk ASCE ny vondrona mpikambana 27. Frantsa, Rosia ary Etazonia ireo filoha mpiara-mitantana ny vondrona ankehitriny, izay niandraikitra tamin'ny fanampiana tamin'ny famahana ny fifandonana.
One avenue for further EU involvement, according to von Cramon, would be if the 27-member bloc replaced France as a co-chair of the OSCE Minsk group. The current co-chairs of the group, which has been tasked with helping resolve the conflict, are France, Russia, and the United States.
Mandritra izany fotoana izany, nilaza i von Cramon fa nahita “fisalasalana hiasa teo amin'ireo mpitarika sasany ny Vondrona Eoropeana ary mihevitra ny tenan'izy ireo ho mpiantsehatra ara-politika.”
“Tsy mba vahaolana tsara mihitsy ny ady. Fantatro ny ezaka ataon'i Rosia amin'ny fifampiraharahana fampitsaharana ady, saingy tsy tsy vahaolana maharitra izany, ” hoy ny MEP Estoniana sady filohan'ny delegasiona Kaokazy Atsimon'ny Vondrona Eoropeana, Marina Kaljurand tamin'ny OC Media.
Nandrisika an'i Armenia sy i Azerbaijan i Kaljirand mba ho avy amin'ny “fifampiraharahana an-databatra eo ambanin'ny fanohanan'ny vondrona Minsk an'ny OSCE mba hahitana vahaolana milamina sy nifampiraharahana amin'ny fifandirana Nagorno-Karabakh.
“Mendrika fandriampahalemana sy fanambinana ny vahoakan'i Armenia sy i Azerbaijan” hoy izy nanampy.
Ny kasinga Rosiana
Amin'ny fanapariahana ireo mpampandry tany 2 000 ao Nagorno-Karabakh, hitan'ny mpanaramaso maro ho “mpandresy” tamin'ny Ady Nagorno-Karabakh Faharoa i Rosia. Ny Vondrona Eoropeana kosa mandritra izany hita fa iray amin'ireo “resy”, satria mihena ny fitaomany manoloana an'i Rosia.
Mandritra izany, mavitrika hatrany any Armenia i Rosia. Tamin'ny volana Oktobra, nitatitra ny fampahalalam-baovao Armeniana fa nomena fifanarahana hamolavola endrika toby misy metro vaovao ao Yerevan ny orinasa Rosiana MetrogiProtrans. Ary tamin'ny volana Oktobra ihany, “nanapa-kevitra ny Synoda Masin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana fa hametraka ny Diosezy Armeniana amin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana any Yerevan,” araka ny tatitra nataon'ny News.Am.
Saingy araka ny filazan'i Viola von Cramon, mifototra voalohany amin'ny fisian'ny “baotin'ny miaramila eny ifotony” fa tsy amin'ny “fanoloran-tena amin'ny famahana ny ady” ny fitomboan'ny fitaomana Rosiana any Kaokazy Atsimo. Raha jerena ny fitombon'ny fitaomana Tiorka ao Azerbaijan, “dia sarotra ho an'ny Vondrona Eoropeana ny hanana fitaomana ara-politika,” hoy i von Cramon tamin'ny tafatafa iray.
Mizara anjara andraikitra samihafa ao amin'ny faritra ihany koa i Rosia sy ny Vondrona Eoropeana. Araka ny voalazan'i Von Cramon, tsy mitady ny hanao an'i Armenia na firenena hafa ao amin'ny faritra ho “miankin-doha” amin'izy ireo ny Vondrona Eoropeana, tsy mitovy amin'ny “zavatra ataon'ny Rosiana sy ny nataony taloha.”
Na eo aza ny fandrosoana apetrak'i Rosia any Armenia, ho an'ny Stanytė-toločkenė, mitoetra ho tena “mpiara-miasa voalohany amin'ny fanavaozana an'i Armenia ny Vondrona Eoropeana. Saingy tsy mila misafidy amin'ny fitodihana avaratra na andrefana ihany koa ny Armeniana, araka ny filazan'ny ambasadaoron'ny Vondrona Eoropeana Andrea Wiktorin. Afaka “mamolavola ny sakany sy ny halalin'ny fifandraisany amin'ny Vondrona Eoropeana sy ireo mpiantsehatra iraisam-pirenena hafa” ireo firenena Tatsinanana Mpiara-miasa, hoy i Wiktorin. Ny “CEPA, ohatra, dia”mifanaraka tanteraka” amin'ny maha-mpikambana an'i Armenia ao amin'ny Vondrona Ara-toekarena Eoraziatika tarihan'i Rosia.